एक किलो कै १० लाख रुपैयाँ पर्ने केशर खेति यसरि गर्नुहोस ( भिडियो सहित ) - khull Post
पुरुषोत्तम ढकाल २४ असार २०७८, बिहीबार २०:३८ 129 Views
काठमाडौँ: केशर संसारको सबै भन्दा महँगो मसला बाली हो । यसलाई औषधि तथा सौन्दर्यका सामांग्रीको रुपमा समेत प्रयोग गरिन्छ । दक्षिण यूरोपमा बढी फल्ने केशरको माग हाम्रो देश नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ ।
अत्यन्तै दुर्लभ र महँगो जडीबुटी मानिने केशर अहिले नेपालको जुम्लामा व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको छ । नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार ७ देखि १० केजि सम्म मात्रै यसको उत्पादन भएको पाईन्छ । विश्वमा केशरको खेती गर्दै आएका देशमा स्पेन, फ्रान्स, इटाली, ग्रीस, टर्की, भारत, चीन र जापान रहेका छन् ।
केशर खेतीको लागि धेरै गर्मी र धेरै जाडो नहुने हावापानी उपयोगी हुन्छ । केही मात्रामा हिउँ पर्ने तुषारो पर्ने ठाउँमा यसको उत्पादन राम्रो हुन्छ। त्यस्तै केशर खेतीको लागि पानी नजम्ने, बलौटे, दोमट र क्षारयुक्त माटो उपयुक्त हुन्छ ।
केशर खेती गर्नेको लागि हामीले सर्बप्रथम जमिनलाई राम्रो संग खन जोत गर्नुपर्छ। त्यसपछि असार देखि असोज महिना सम्म यसको विरुवा रोप्न सकिन्छ।
यसको खेति गर्दा एक रोपनी जग्गामा ४० डोको गोठेमल हाल्ने, ३ फिट चौडा भएको व्याड तयार गर्ने, व्याडको लम्बाई ठाउँ हेरी बनाउने, व्याडको उचाई ६ इन्च जति बनाउने, एक रोपनीमा नाइट्रोजन, फास्फोरस र पोटास ५ के.जि. राख्ने, किराको प्रकोप भएमा मालाथिन पाउडर छर्ने तरिका अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसको खेति गर्नुअघि गाना ग्रेडिङ गर्ने, गानामा अनावश्यक टुसाहरु आउने दिने, ठूला टुसाहरु राखी अरु टुसा फाली दिने, तखतामा फुलाउने साइज हेरी २०–३० ग्रामको गानामा दुईवटा राख्ने, व्याडमा फुलाउने र व्याडमा फुलाउन २ इन्च जति लामा टुसा भएमा गाना जमिनमा लगाउने गनुपर्छ । लगाउने तरीका र उत्पादन केशरको गानालाई एक घण्टासम्म वेमिस्टिनको झोलमा डुबाउने, लहर देखि लहरको दुरी १५ से.मि. ६ इन्च राख्ने, गाना देखि गानाको दुरी १० से.मि. ४ इन्च राख्ने, गहिराई १० से.मि. ४ इन्च सम्म राखेर केशर लगाइसकेपछि परालले छोपिदिने गर्नुपर्छ ।
केशरको फुल १५ दिनपछि फुल्छ । विहान शित ओभाएपछि फुल टिप्ने गर्नुपर्छ । टिपपसकेपछि पानीको मात्रा हटाउनको लागि शिशाको बाकस भित्र मैन कागजमा फुल राखेर २–३ घण्टासम्म सुकाउने गर्नुपर्छ ।
एउटा फुलमा १०–१५ मि.ग्रा. केशर प्राप्त हुन्छ । एक लाख देखि १.५ लाख फुलबाट एक कि.ग्रा. केशर प्राप्त हुन्छ । १ के.जि. केसर उत्पादन गर्न २५ देखि ३० ग्राम तौल भएका ७५० देखि ८०० गाना आवश्यक पर्छ ।
विश्वकै महँगो र दुर्लभ कृषि उपज मानिने केशर प्रति के.जि १० लाख रुपैयाँमा सजिलै बजारमा बिक्री हुन्छ ।
केशर स्वास्थ्यका दृष्टिले धेरै फाइदाजनक छ युर्वेदका अनुसार केसरले मानिसको कामशक्ति बढाउने, मुत्राशय, कलेजो, मष्तिष्क र आँखाको समस्या पनि हटाउने काम गर्नुका साथै अनुहार सफा बनाउने गर्छ ।
त्यस्तै यसको प्रयोगले हिस्टेरिया रोगको समस्या भोगिरहेका मानिसहरुलाई पनि फाइदा गर्छ भने भर्खर जन्मेको बच्चालाई दुधमा मिलाएर केसर खुवाउनाले बच्चा सुन्दर र हिष्टपुष्ट हुने हुन्छ ।
यसका साथसाथै यसको प्रयोगले पुरुषको वीर्य शक्ति बढाउने, पेट सम्वन्धि विभिन्न समस्याहरु हट्ने हुन्छ भने नाकबाट रगत बग्ने समस्या भएमा चन्दनलाई केसरको साथमा पिसेर निधारमा लेप लगाउनाले आँखा र मष्तिष्कमा शीतलता महशुस हुने र नाकबाट रगत बगत छोड्ने तथा टाउको दुखेको पनि हटेर जानछ ।
यसैगरी यसको प्रयोगले तालु खुइलिएको समस्या पनि हटेर जान्छ । केशर जुनसुकै रोगको औसधिमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ यसबाट हामीले स्वास्थ्य लाभ र आर्थिक लाभ लिन सक्छौ । त्यसैले नेपालमा यसको व्यावसायिक खेति गर्नु धेरै फाइदाजनक छ ।
केशर खेति गर्ने तरिका भिडियो सहित हेर्नुहोस्:
आज असार १५, दही-चिउरा खाने दिन : राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै ( भिडियो सहित ) हेर्नुहोस
नेपालमा रातो केरा खेती गरेर यसरि लाखौं आम्दानी गरिदै (भिडियो सहित) हेर्नुहोस: